काठमाण्डौमा घरबेटीले यौ*नकर्मी हो भन्ने थाहापाएपछि गरे यस्तो व्यवहार…! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाण्डौमा घरबेटीले यौ*नकर्मी हो भन्ने थाहापाएपछि गरे यस्तो व्यवहार…!
पार्वती (नाम परिवर्तन) व्यावसायिक यौ’नक’र्मी हुन्। यही कामले उनको घरपरिवार चलेको १० वर्ष भयो। यस बीचमा उनी काठमाडौँको सयभन्दा बढी ठाउँमा डेरा सरिसकिन्। ‘घरबेटीले यौ’नक’र्मी भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै घरबाट निकालिदिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘समाजले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुँदैन। हामीलाई हेर्दै कानेखुशी गर्ने धेरै हुन्छन्। जता गए पनि हामीले ठक्करैठक्कर खानुपर्छ।’
अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।’स्वास्थ्य समस्या पर्दा उनी डाक्टरकहाँ जाँदिनन्। कुनै ग्राहकले ठगेर भाग्यो भने प्रहरीकहाँ उजुरी गर्नेबारे उनले कहिल्यै सोचेकी छैनन्। ‘हामी यौ’नक’र्मी हो भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै जसले पनि हामीलाई गर्ने व्यवहार नै फरक हुन्छ,’ पार्वतीले भनिन्, ‘ग्राहकसँग जाने बेलामा मात्र हामी यौ’नक’र्मी हौँ। बाँकी समय हामी पनि कसैका दिदी, बहिनी र आमा हौँ। तर, जसले पनि हामीलाई एकचोटि यौ’नक’र्मी भनेर चिनेपछि सधैँभरि यौ’नक’र्मीकै रूपमा चिन्छन्, त्यस्तै व्यवहार गर्छन्।’
आफूजस्ता महिलालाई सार्वजनिक स्थानमा बस्नै डरमर्दो भएको उनले सुनाइन्। ‘केही नगर्दा पनि चिया खाएको ठाउँबाट प्रहरीले समातेर लैजान्छ,’ पार्वतीले भनिन्, ‘सार्वजनिक बाटोमा हिँड्ने हाम्रो चाहिँ अधिकार छैन र ? हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ।’
पार्वतीकी साथी अनुजा (नाम परिवर्तन) लाई केही दिनअघि रत्नपार्कमा प्रहरीले समात्यो। ‘पुलिसले चौकी पुर्‍याउनुअघि नै नराम्ररी पि”ट्यो,’ उनले भनिन्, ‘मेरो जीउमा अझै पनि नी’लडा’म छन्। हामी त रत्नपार्कमा उभिएको देख्नै हुँदैन, समातिहाल्छ। केही गल्ती नगर्दा पनि पुलिस देखेपछि भाग्न बाध्य हुन्छौँ।’
प्रहरीले समातेर मात्रै आफ्नो समस्या समाधान नहुने उनले बताइन्। ‘वर्षौंदेखि गर्दै आएको पेशा हामी छाड्दैनौं,’ अनुजाले भनिन्, ‘हामीले कसरी सुरक्षित रूपमा यौ”न श्रम गर्ने भन्ने कुरा बुझिसक्यौं। बुझ्न नसकेको त कानुनको कुरा मात्र हो। कानुनले यौ”न श्रमिक महिलालाई कु’टे”र थ”ला पार भन्छ हो ? नत्र हामीलाई दिउँसै सडकमा हिँड्न किन दिइँदैन ?’
सगरमाथा आरोहण गरेर बिस्व रेकर्ड राख्न सफल साहासी बहादुरी महिला पत्रकार कल्पनालाई हार्दिक बधाई
पहिलो पटक H10N3 बर्ड फ्लु संक्रमण मानिसमा भेटियो
फेरि १८ दिन सम्म देशभर सम्पुर्ण कुरा बन्द हुन सक्ने ! भर्खरै गरियो यस्तो निर्णय !